Posted in ဗဟုတုသ LeaveaComment on ပဲပင်ပေါက် အလွှာလိုက် ဖောက်နည်း။
အစာအိမ်အောင့်၊ အစာအိမ်နာ၊ ဝမ်းဖောဝမ်းရောင်၊ ကိုက်ခဲနာကျင်တာတွေ လက်တွေ့ ပျောက်စေတဲ့ ဗန်ဒါရွက်အစွမ်း။
တချို့က ဗန်ဒါရွက်ကို နေရိပ်မှာလှန်းပီး အမှုန့်လုပ်ပီး လျက်ဆားလျက်သလို စားကြပါတယ်။ အမှုန့်လုပ်သောက်နိူင်ရင်ပိုကောင်းတယ်။ ကျနော် အရင်က အစာအိမ်ရောဂါဝေဒနာကိုအလူးအလိမ့် ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဆန်ပြုတ်ကို လချီသောက်ရတယ်။ ဆန်ပြုတ်သောက်တိုင်း မျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်။ ဆေးရုံမှာ ၁လကျော်၂လနီးပါး တက်ရောက်ကုသဖူးတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေလည်း ကျခဲ့တယ်။ ငါ ဒီရောဂါနဲ့ သေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ပါ။ သေမယ့်သေရင်တောင် ကိုယ်စားချင်တာစားပီး သေချင်တယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ ဗန်ဒါရွက်ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကို မြည်းစမ်းခွင့်ရခဲ့တယ်။ ချက်ချင်းပဲ လိုက်ရှာခူးတယ်။ အပင်ကမဝေးပါဘူး။ ကိုယ့်အနီးအးနာမှာပဲ အဆင်သင့်ရှိနေခဲ့တယ်။ ၁၀ရွက်လောက် ကျိူသောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ နာကျင်ကိုက်ခဲနေတာတွေ တဖြည်းဖြည်းသက်သာလာတယ်။ အချိန် ၁၀မိနစ်ပါပဲ။ သောက်ပီးမကြာဘူးဗိုက်ဆာလာတယ်။ ကြာဇံဟင်းခါး ၂ပွဲဆက်တိုက် သောက်လိုက်တယ်။ ဗန်ဒါရွက်ပြုတ် ထပ်သောက်တယ်။ ထမင်းစားတယ်။ ယူပစ်လိုက်သလိုပဲ လုံးဝကောင်းသွားတယ်။ ဘာမှစားလို့မရတဲ့လူက စားချင်တာစားလို့ ရသွားပီ။ အခုလည်းအိမ်ကသမီး
Credit–ဆီ မီး ခွက်
တခ်ိဳ႕က ဗန္ဒါ႐ြက္ကို ေနရိပ္မွာလွန္းပီး အမႈန႔္လုပ္ပီး လ်က္ဆားလ်က္သလို စားၾကပါတယ္။ အမႈန႔္လုပ္ေသာက္ႏိူင္ရင္ပိုေကာင္းတယ္။ က်ေနာ္ အရင္က အစာအိမ္ေရာဂါေဝဒနာကိုအလူးအလိမ့္ ခံစားခဲ့ရတယ္။ ဆန္ျပဳတ္ကို လခ်ီေသာက္ရတယ္။ ဆန္ျပဳတ္ေသာက္တိုင္း မ်က္ရည္က်ခဲ့ရတယ္။ ေဆး႐ုံမွာ ၁လေက်ာ္၂လနီးပါး တက္ေရာက္ကုသဖူးတယ္။စိတ္ဓာတ္ေတြလည္း က်ခဲ့တယ္။ ငါ ဒီေရာဂါနဲ႔ ေသရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အသိနဲ႔ပါ။ ေသမယ့္ေသရင္ေတာင္ ကိုယ္စားခ်င္တာစားပီး ေသခ်င္တယ္။ ကံေကာင္းစြာနဲ႔ ဗန္ဒါ႐ြက္ရဲ႕အစြမ္းသတၱိကို ျမည္းစမ္းခြင့္ရခဲ့တယ္။ ခ်က္ခ်င္းပဲ လိုက္ရွာခူးတယ္။ အပင္ကမေဝးပါဘူး။ ကိုယ့္အနီးအးနာမွာပဲ အဆင္သင့္ရွိေနခဲ့တယ္။ ၁၀႐ြက္ေလာက္ က်ိဴေသာက္လိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲ နာက်င္ကိုက္ခဲေနတာေတြ တျဖည္းျဖည္းသက္သာလာတယ္။ အခ်ိန္ ၁၀မိနစ္ပါပဲ။ ေသာက္ပီးမၾကာဘူးဗိုက္ဆာလာတယ္။ ၾကာဇံဟင္းခါး ၂ပြဲဆက္တိုက္ ေသာက္လိုက္တယ္။ ဗန္ဒါ႐ြက္ျပဳတ္ ထပ္ေသာက္တယ္။ ထမင္းစားတယ္။ ယူပစ္လိုက္သလိုပဲ လုံးဝေကာင္းသြားတယ္။ ဘာမွစားလို႔မရတဲ့လူက စားခ်င္တာစားလို႔ ရသြားပီ။ အခုလည္းအိမ္ကသမီး
Credit–ဆီ မီး ခြက္
Posted in က်န္းမာေရးဗဟုသုတ LeaveaComment on အစာအိမ်အောင့်၊ အစာအိမ်နာ၊ ဝမ်းဖောဝမ်းရောင်၊ ကိုက်ခဲနာကျင်တာတွေ လက်တွေ့ ပျောက်စေတဲ့ ဗန်ဒါရွက်အစွမ်း။
လိပ်ခေါင်း၊ ဝမ်းကိုက်၊ သွေးတိုးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းအတွက် ပုဏ္ဏရိတ်ရွက် ပြုတ်ရည်။
ခြံစည်းရိုးပင်အနေနဲ့ အစိုက်များကြတဲ့ ပန်းသေးသေးလေးတွေ ပွင့်ကြတဲ့ ပုဏ္ဏရိတ်ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက မြင်ဖူးကြမှာပါ။ အလှစိုက်ထားလေ့ရှိတဲ့ ပုဏ္ဏရိတ်ပန်းလေးတွေက အခုလို ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
တီဘီရောဂါဆိုတာက ကိုယ်တွင်းမှာဖြစ်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ ချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အခါ သွေးပါတာမျိုး တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ တီဘီရောဂါဖြစ်ပြီဆိုရင် ချက်ချင်းကုသမှု ခံယူဖို့ လိုပါတယ်နော်။တီဘီရောဂါက မကုသဘဲ ထားမယ်ဆိုရင် အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ တီဘီရောဂါက လေထဲကနေတဆင့် ကူးစက်တာပါ။ တီဘီရောဂါကို ဆေးဝါးတွေနဲ့ ကုသတာက အထိရောက်ဆုံးပါ။ ဒါပေမယ့် သဘာဝဆေးအနေနဲ့ကတော့ ပုဏ္ဏရိတ်ပင်ကို သုံးလို့ရပါတယ်နော်။
အသက်အရွယ်ရလာတဲ့ လူတော်တော်များများမှ ာတွေ့ရတဲ့ရောဂါ တစ်ခုပေါ့။ သွေးတိုးတာကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာ ဖြစ်နိုင်သလို တစ်နေ့တာ အလုပ်တွေကို မလုပ်နိုင်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးက ရေရှည်မှာ နှလုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးတိုးရှိသူတွေအနေနဲ့ ပုဏ္ဏရိတ်ရွက်ကို သုံးလို့ရပါတယ်နော်။
ပုဏ္ဏရိတ်အရွက်မှာ အနာကျက်စေနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ ပုဏ္ဏရိတ်ပင်ရဲ့ သဘဝဓါတ်ပေါင်းတွေက အနာကို မြန်မြန်ကျက်စေဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ အနာအတွက် ပုဏ္ဏရိတ်ရွက်ကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ရေနဲ့ သန့်စင်အောင် ဆေးဖို့ပြောပါရစေနော်။ မလိုအပ်ဘဲ အနာပိုးဝင်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ နာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေကို သက်သာစေဖို့ ဆေးမသောက်ချင်ဘူး ဆိုသူတွေအတွက် သဘာဝနည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ပုဏ္ဏရိတ်ရွက်ပြုတ်ရည်ကို နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေအတွက် အသုံးပြုလို့ ရတယ်ဆိုတာပါ။ ဆေးတွေကိုကြောက်တဲ့သူတွေအတွက် အသုံးတည့်မှာပါ။
လိပ်ခေါင်းဖြစ်တာက ထိုင်ရထရခက်တဲ့ ဝေဒနာတစ်ခုပါ။ ထိုင်နေစဉ်မှာ မသက်မသာ ခံစားရသလို ဝမ်းသွားတဲ့အခါမှာလည်း တော်တော်နေရခက်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ သွေးထွက်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရမ်းပြင်းထန်တဲ့ အနေအထားမျိုးမှာ ခွဲစိတ်ကုသတာမျိုးအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်ခုကတော့ ပုဏ္ဏရိတ်ပန်းပါ။ အရမ်းမပြင်းထန်သေးတဲ့ လိပ်ခေါင်းပြဿနာကို ပုဏ္ဏရိတ်ပန်းက ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းကိုက်သက်သာစေဖို့အတွက်လည်း ပုဏ္ဏရိတ်ပန်းကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ပုဏ္ဏရိတ်ပင်မှာ ရောဂါတွေကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ သဘာဝဓါတ်ပေါင်းတွေ ပါဝင်နေတာကြောင့် ဝမ်းကိုက်တာကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
လေဒီလေးတွေ ကျန်းမာဖို့အတွက်က ရာသီသွေးမှန်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ရာသီသွေးပုံမှန်ဆင်းမှာ အသားအရေကစလို့ တစ်ကိုယ်လုံး ကျန်းမာမှာပါ။ ဘေဘီလေးလိုချင်တဲ့ လေဒီတို့အတွက်လည်း အဆင်ပြေစေမှာပါ။ ဒါကြောင့် လေဒီတိုင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ ရာသီသွေးမှန်စေဖို့ဆိုရင် ပုဏ္ဏရိတ်ပန်းကို အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။
ခြေသလုံးတွေ ကိုက်ခဲတာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်-
အကိုက်အခဲပျောက်စေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ခြေသလုံးကြွက်သားတွေ နာကျင်ကိုက်ခဲနေတာကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး သက်သာစေနိုင်မှာပါ။ ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေပြီး နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို သက်သာစေမှာပါ။
ၿခံစည္း႐ိုးပင္အေနနဲ႔ အစိုက္မ်ားၾကတဲ့ ပန္းေသးေသးေလးေတြ ပြင့္ၾကတဲ့ ပုဏၰရိတ္ကို ငယ္ငယ္ကတည္းက ျမင္ဖူးၾကမွာပါ။ အလွစိုက္ထားေလ့ရွိတဲ့ ပုဏၰရိတ္ပန္းေလးေတြက အခုလို က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးေလးေတြ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။
တီဘီေရာဂါဆိုတာက ကိုယ္တြင္းမွာျဖစ္တဲ့ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးပါ။ ေခ်ာင္းဆိုးလိုက္တဲ့အခါ ေသြးပါတာမ်ိဳး ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။ တီဘီေရာဂါျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းကုသမႈ ခံယူဖို႔ လိုပါတယ္ေနာ္။တီဘီေရာဂါက မကုသဘဲ ထားမယ္ဆိုရင္ အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ တီဘီေရာဂါက ေလထဲကေနတဆင့္ ကူးစက္တာပါ။ တီဘီေရာဂါကို ေဆးဝါးေတြနဲ႔ ကုသတာက အထိေရာက္ဆုံးပါ။ ဒါေပမယ့္ သဘာဝေဆးအေနနဲ႔ကေတာ့ ပုဏၰရိတ္ပင္ကို သုံးလို႔ရပါတယ္ေနာ္။
အသက္အ႐ြယ္ရလာတဲ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ ာေတြ႕ရတဲ့ေရာဂါ တစ္ခုေပါ့။ ေသြးတိုးတာေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္တာ ျဖစ္ႏိုင္သလို တစ္ေန႔တာ အလုပ္ေတြကို မလုပ္ႏိုင္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေသြးတိုးက ေရရွည္မွာ ႏွလုံးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသြးတိုးရွိသူေတြအေနနဲ႔ ပုဏၰရိတ္႐ြက္ကို သုံးလို႔ရပါတယ္ေနာ္။
ပုဏၰရိတ္အ႐ြက္မွာ အနာက်က္ေစႏိုင္တဲ့ အစြမ္းသတၱိရွိပါတယ္။ ပုဏၰရိတ္ပင္ရဲ႕ သဘဝဓါတ္ေပါင္းေတြက အနာကို ျမန္ျမန္က်က္ေစဖို႔ လႈံ႕ေဆာ္ေပးပါတယ္။ အနာအတြက္ ပုဏၰရိတ္႐ြက္ကို သုံးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရနဲ႔ သန႔္စင္ေအာင္ ေဆးဖို႔ေျပာပါရေစေနာ္။ မလိုအပ္ဘဲ အနာပိုးဝင္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစဖို႔ပါ။
ခႏၶာကိုယ္မွာ နာက်င္ကိုက္ခဲတာေတြကို သက္သာေစဖို႔ ေဆးမေသာက္ခ်င္ဘူး ဆိုသူေတြအတြက္ သဘာဝနည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ပုဏၰရိတ္႐ြက္ျပဳတ္ရည္ကို နာက်င္ကိုက္ခဲမႈေတြအတြက္ အသုံးျပဳလို႔ ရတယ္ဆိုတာပါ။ ေဆးေတြကိုေၾကာက္တဲ့သူေတြအတြက္ အသုံးတည့္မွာပါ။
လိပ္ေခါင္းျဖစ္တာက ထိုင္ရထရခက္တဲ့ ေဝဒနာတစ္ခုပါ။ ထိုင္ေနစဥ္မွာ မသက္မသာ ခံစားရသလို ဝမ္းသြားတဲ့အခါမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ေနရခက္ပါတယ္။ ျပင္းထန္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေသြးထြက္တာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အရမ္းျပင္းထန္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးမွာ ခြဲစိတ္ကုသတာမ်ိဳးအထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္ သဘာဝေဆးဖက္ဝင္အပင္တစ္ခုကေတာ့ ပုဏၰရိတ္ပန္းပါ။ အရမ္းမျပင္းထန္ေသးတဲ့ လိပ္ေခါင္းျပႆနာကို ပုဏၰရိတ္ပန္းက ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။
ဝမ္းကိုက္သက္သာေစဖို႔အတြက္လည္း ပုဏၰရိတ္ပန္းကို အသုံးျပဳလို႔ရပါတယ္။ ပုဏၰရိတ္ပင္မွာ ေရာဂါေတြကို သက္သာေစႏိုင္တဲ့ သဘာဝဓါတ္ေပါင္းေတြ ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ ဝမ္းကိုက္တာကိုလည္း သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။
ေလဒီေလးေတြ က်န္းမာဖို႔အတြက္က ရာသီေသြးမွန္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ရာသီေသြးပုံမွန္ဆင္းမွာ အသားအေရကစလို႔ တစ္ကိုယ္လုံး က်န္းမာမွာပါ။ ေဘဘီေလးလိုခ်င္တဲ့ ေလဒီတို႔အတြက္လည္း အဆင္ေျပေစမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေလဒီတိုင္းအတြက္အေရးပါတဲ့ ရာသီေသြးမွန္ေစဖို႔ဆိုရင္ ပုဏၰရိတ္ပန္းကို အသုံးျပဳေပးလို႔ ရပါတယ္။
ေျခသလုံးေတြ ကိုက္ခဲတာကို သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္-
အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေစႏိုင္တဲ့ အာနိသင္ရွိပါတယ္။ ေျခသလုံးႂကြက္သားေတြ နာက်င္ကိုက္ခဲေနတာကို အျမန္ဆုံးနဲ႔ အထိေရာက္ဆုံး သက္သာေစႏိုင္မွာပါ။ ႂကြက္သားေတြကို ေျပေလ်ာ့ေစၿပီး နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကို သက္သာေစမွာပါ။
Posted in က်န္းမာေရးဗဟုသုတ LeaveaComment on လိပ်ခေါင်း၊ ဝမ်းကိုက်၊ သွေးတိုးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းအတွက် ပုဏ္ဏရိတ်ရွက် ပြုတ်ရည်။
Posted in ဗဟုတုသ LeaveaComment on လူကြီး၊ ကလေးတိုင်း ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတဲ့ ပဲနို့ရည် အိမ်မှာလုပ်နည်း။
ရှောက်ပင်တစ်ပင်လုံး ဆေးအသုံး၊ မှတ်ထားစရာများ။
ရှောက်သီးဟာ နှလုံးကို ကြည်လင်စေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေါ့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။ မူးမောခြင်း၊ ချောင်းဆိုခြင်း၊ ခံတွင်းမမြိန်ခြင်း တို့ကို ရှောက်သီးဖြင့် ကုသနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မြင်းသရိုက်နာ၊ ဝမ်းချုပ်နာ၊ ကြို့ထိုးနာ၊ ထုံကျဉ်နာ၊ အော့အန်နာတို့ကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ရှောက်သီးကို ဖျော်သောက်ပေးရင်တော့ ဆီးကို ရွှင်စေပါတယ်။ အစာကြေပြီး ဝမ်းကိုပါ မှန်စေနိုင်ပါတယ်။
ရှောက်ဖူးနဲ့ ရှောက်ပွင့်တို့ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ စွမ်းအားကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အစားစာချင်စိတ် မရှိသူများအတွက် ဆာလောင်ပြီး စားချင်လိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။အော့အန်ခြင်းကို တားမြစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဖုအပိန့် အထုံးအဖွဲ့များကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီး၊ ပန်းနာ၊ ရင်ကျပ်၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုး၊ မူးဝေခြင်းတို့ကိုပါပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ရှောက်သီးမှည့်ဟာ ချိုသက်သက်နှင့် ဖန်တဲ့အရသာရှိပါတယ်။ လည်ချောင်းကို သန့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေပြီး နှုတ်ကို မြိန်စေပါတယ်။ ရေငတ်ခြင်း၊ ကြို့ထိုးခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခွန်အားကို ဖြစ်စေပါတယ်။ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ အစာမကြေ လေပွခြင်း၊ လေနာ ရင်နာဖြစ်ခြင်း၊ သလိပ်ကျပ် ပန်းနာ၊ ကြက်ညှာ ချောင်းဆိုး၊ ဖောရောင်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ လည်ချောင်းအတွင်းတွင် ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများနှင့် နူနာရောဂါကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရှောက်သီး အမြွာသည် ဝမ်းမီးတောက်၏။ နှုတ်ကို မြိန်စေ၏။ ရင်နာ၊ ဂူလုံးနာ၊ ပန်းနာချောင်းဆိုး၊ ကြို့ထိုးခြင်း၊ ရူးသွပ်ခြင်း၊ ဖောရောင်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ မြင်းသရိုက် ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ရှောက်သီး အခွံဟာ ခါးတဲ့ အရသာရှိပါတယ်။ ပိုးနာ၊ လေနာ၊ သလိပ်နာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ရှောက်အခွံအတွင်းသားဟာ ပွရောင်းရောင်း ရှိပါတယ်။ ထိုးအောင့်နာကျင်ခြင်း၊ ခါးတွင် လေရှိခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်း၊ သည်းခြေနာနဲ့ နှုတ်မမြိန်သောရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ခါးတဲ့ အရသာရှိပါတယ်။ ရှောက်သီးစေ့ဟာ သလိပ်နာ၊ မြင်းသရိုက်နာ၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ လေနာ၊ သည်းခြေနာတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ေရွာက္သီးဟာ ႏွလုံးကို ၾကည္လင္ေစပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ကို ေပါ့ပါးေစႏိုင္ပါတယ္။ မူးေမာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုျခင္း၊ ခံတြင္းမၿမိန္ျခင္း တို႔ကို ေရွာက္သီးျဖင့္ ကုသႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ျမင္းသ႐ိုက္နာ၊ ဝမ္းခ်ဳပ္နာ၊ ႀကိဳ႕ထိုးနာ၊ ထုံက်ဥ္နာ၊ ေအာ့အန္နာတို႔ကိုလည္း ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ေရွာက္သီးကို ေဖ်ာ္ေသာက္ေပးရင္ေတာ့ ဆီးကို ႐ႊင္ေစပါတယ္။ အစာေၾကၿပီး ဝမ္းကိုပါ မွန္ေစႏိုင္ပါတယ္။
ေရွာက္ဖူးနဲ႔ ေရွာက္ပြင့္တို႔ဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ စြမ္းအားကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ အစားစာခ်င္စိတ္ မရွိသူမ်ားအတြက္ ဆာေလာင္ၿပီး စားခ်င္လိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ေအာ့အန္ျခင္းကို တားျမစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဖုအပိန႔္ အထုံးအဖြဲ႕မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ၿပီး၊ ပန္းနာ၊ ရင္က်ပ္၊ ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုး၊ မူးေဝျခင္းတို႔ကိုပါေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္။
ေရွာက္သီးမွည့္ဟာ ခ်ိဳသက္သက္ႏွင့္ ဖန္တဲ့အရသာရွိပါတယ္။ လည္ေခ်ာင္းကို သန႔္ရွင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဝမ္းမီးကို ေတာက္ေစၿပီး ႏႈတ္ကို ၿမိန္ေစပါတယ္။ ေရငတ္ျခင္း၊ ႀကိဳ႕ထိုးျခင္းတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခြန္အားကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ အစာမေၾက ေလပြျခင္း၊ ေလနာ ရင္နာျဖစ္ျခင္း၊ သလိပ္က်ပ္ ပန္းနာ၊ ၾကက္ညႇာ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ေဖာေရာင္ျခင္းတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ လည္ေခ်ာင္းအတြင္းတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ႏူနာေရာဂါကိုပါ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
ေရွာက္သီး အႁမြာသည္ ဝမ္းမီးေတာက္၏။ ႏႈတ္ကို ၿမိန္ေစ၏။ ရင္နာ၊ ဂူလုံးနာ၊ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုး၊ ႀကိဳ႕ထိုးျခင္း၊ ႐ူးသြပ္ျခင္း၊ ေဖာေရာင္ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ျမင္းသ႐ိုက္ ေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္။
ေရွာက္သီး အခြံဟာ ခါးတဲ့ အရသာရွိပါတယ္။ ပိုးနာ၊ ေလနာ၊ သလိပ္နာတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ေရွာက္အခြံအတြင္းသားဟာ ပြေရာင္းေရာင္း ရွိပါတယ္။ ထိုးေအာင့္နာက်င္ျခင္း၊ ခါးတြင္ ေလရွိျခင္း၊ ကိုက္ခဲျခင္း၊ သည္းေျခနာနဲ႔ ႏႈတ္မၿမိန္ေသာေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္။
ခါးတဲ့ အရသာရွိပါတယ္။ ေရွာက္သီးေစ့ဟာ သလိပ္နာ၊ ျမင္းသ႐ိုက္နာ၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ေလနာ၊ သည္းေျခနာတို႔ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
Posted in က်န္းမာေရးဗဟုသုတ LeaveaComment on ရှောက်ပင်တစ်ပင်လုံး ဆေးအသုံး၊ မှတ်ထားစရာများ။
စာချုပ် ချုပ်မည်ဆိုလျှင် စာချုပ်ပါ သက်သေကိစ္စ။
စာချုပ် ချုပ်မည်ဆိုလျှင် စာချုပ်ပါ သက်သေကိစ္စ
“အောက်ပါ အသိသက်သေများ ရှေ့မှောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုကြပါသည် “ ဟူ၍ စာချုပ်များပေါ်တွင် ဖော်ပြပါရှိလေ့ရှိပြီး နှစ်ဘက်လက်မှတ် ရေးထိုးကာ အသိသက်သေများ ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်ဖြစ်သော်လည်း ပြဿနာပေါ်ပေါက်၍ အသိသက်သေများကို စစ် ဆေးမေးမြန်းသောအခါတွင်မူ သက်သေအဖြစ် ရေးထိုးခဲ့သော စာချုပ်ပါ အချက်များကို ပြန်လည် ပြောပြနိုင်သည့် အသိသက်သေမျိုးမှာ အတော်ပင် ရှားပါးတတ်ပါသည်။
အချို့က မိမိရေးထိုးခဲ့သည့် လက်မှတ်ကို ပြန်ကြည့်ကာ မိမိလက်မှတ် ဟုတ် မဟုတ် မိမိရေးထိုးခဲ့ခြင်း ဟုတ် မဟုတ် ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေတတ်ကြပါသည်။ အချို့ကလည်း သက်သေအဖြစ် မိမိလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် မှန်သော်လည်း စာချုပ်ပါ အချက်များကို မသိကြောင်း ပြောပါသည်။
စာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာ မရေရာသော ထွက်ဆိုချက်များကိုသာ ပြောဆိုပြီး စာချုပ်ပါ အချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တိတိကျကျ မပြောနိုင်၊ မဖြေနိုင်သည်ကို ဆင်ခြေအမျိုးမျိုးပေး ဖြေရှင်းတတ်ကြပါ သည်။ ၎င်းတို့အား အပြစ်မဆိုသာဟု ဆိုရပါမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့အနေဖြင့် လူမှုရေးအရ အကူအညီပေးသည့် သဘောဖြင့် ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကာယံရှင်များ သဘောတူ ချုပ်ဆိုသည့် အချက်များကို သိရှိသဘောပေါက်ပြီးနောက် လက်ခံသောအခါတွင်မှ အသိသက်သေနေရာတွင် ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးစေသင့်ပါသည်။ ထို့ပြင် အသိသက်သေအဖြစ် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးသူအား ထိုက်သင့်သော ချီးမြှင့်မှုကိုလည်း ပြုရန် ဝန်မလေးသင့်ဟု အကြံပြုလိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်စုံတစ်ရာ ပြဿနာပေါ်ပေါက်လာသော အခါ ကြုံကြိုက်သက်သေတစ်ဦး၏ ထွက်ဆိုချက်သည် လွန်စွာ တန်ဖိုးနည်းပါးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ရာ စာချုပ် ချုပ်ပြီဆိုမှဖြင့် ချုပ်ရကျိုးနပ်စေရန်နှင့် တိတိကျကျ ထိထိမိမိ အဖြေရှိနိုင်ရန် ဖြစ်သလို ကြုံသလို မလုပ်မိကြဖို့၊ မချုပ်မိကြဖို့ တိုက်တွန်းရပေသည်။
( အညွှန်း- ဦးကျော်ဇေယျ ၊ စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် ဆောင်ရန်နှင့်ရှောင်ရန်များ ၊ စာ ၁၁ ) ။
စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္မည္ဆိုလွ်င္ စာခ်ဳပ္ပါ သက္ေသကိစၥ
( အၫႊန္း- ဦးေက်ာ္ေဇယ် ၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မည္ဆိုလွ်င္ ေဆာင္ရန္ႏွင့္ေရွာင္ရန္မ်ား ၊ စာ ၁၁ ) ။
Posted in ဗဟုတုသ LeaveaComment on စာချုပ် ချုပ်မည်ဆိုလျှင် စာချုပ်ပါ သက်သေကိစ္စ။
ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံး မုန်လာဥဖြူ ဖျော်ရည်လုပ်နည်း။
အစာလည်းဆေး…ဆေးလည်းအစာ။ မုန်လာဥဖြူ တစ်လုံးနဲ့ ကျောက်ကပ်အလွယ်ဆေးကြမယ်။ ကျောက်ကပ်ရောင်သည်ဖြစ်စေ ကျောက်ကပ် ကျောက်တည်သည်ဖြစ်စေ ကျောက်ကပ်ကြောင့် ခါးနာ ခါးကိုက်ခြင်း နှူံးချိ အော့အန်ခြင်းများ အတွက် မုန်လာဥဖြူ တစ်လုံးကို သန့်စင်စွာဆေးကြောပြီး ရေအနည်းထည့်၍ ကြိတ်ချေပါ၊ အဖတ်များ စစ်ထုတ်ပြီး အရည်ကိုသောက်လိုက်ပါ။
၎င်းကြိတ်ရည် ဝမ်းထဲဝင်သွားသည်နှင့် ခါးနာခါးကိုက် ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းသက်သာသွားမည်။ မုန်လာဥဖြူကြိတ်ရည်ဟာ ကျောက်ကပ်ကို ချက်ချင်းဆေးကြောပေးပါတယ်။ အူကျဝေဒနာရှင်များလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်ပါတ်တစ်ခါ ကြိုတင်ကာကွယ်သောအားဖြင့် လူတိုင်းမုန်လာဥဖြူကို ဟင်းလျာအဖြစ် ချက်ပြုတ်စားသုံးခြင်းဖြင့် ကျောက်ကပ်ကို ဆေးကြောထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။
မုန်လာဥ အစိမ်းကို သံပုရာသီးနှင့်နှပ်ပြီး အစိမ်းသုပ် သုပ်စားပါက ပို၍ဆေးဘက်ဝင်ပါတယ်။မုန်လာဥဖြူ စားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ကင်ဆာရောဂါ မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပေးတယ်။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးတယ်။ ကျောက်ကပ် ကျန်းမာစေတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ကို မှန်စေတယ်။ ဝမ်းမှန်စေတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ကျစေတယ်။အသားအရည် စိုပြေလှပစေတယ်။ အရွယ်တင် နုပျိုစေတယ်။ အသုံးမပြုမီ ပိုးသတ်ဆေး ကင်းစင်အောင် သေချာ ဆေးကြောသန့်စင်ပေးရန် အထူးသတိပြုပါ။
အစာလည္းေဆး…ေဆးလည္းအစာ။ မုန္လာဥျဖဴ တစ္လုံးနဲ႔ ေက်ာက္ကပ္အလြယ္ေဆးၾကမယ္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္သည္ျဖစ္ေစ ေက်ာက္ကပ္ ေက်ာက္တည္သည္ျဖစ္ေစ ေက်ာက္ကပ္ေၾကာင့္ ခါးနာ ခါးကိုက္ျခင္း ႏႉံးခ်ိ ေအာ့အန္ျခင္းမ်ား အတြက္ မုန္လာဥျဖဴ တစ္လုံးကို သန႔္စင္စြာေဆးေၾကာၿပီး ေရအနည္းထည့္၍ ႀကိတ္ေခ်ပါ၊ အဖတ္မ်ားစစ္ထုတ္ၿပီး အရည္ကိုေသာက္လိုက္ပါ။
၎ႀကိတ္ရည္ ဝမ္းထဲဝင္သြားသည္ႏွင့္ ခါးနာခါးကိုက္ ယူပစ္သလိုေပ်ာက္ကင္းသက္သာသြားမည္။ မုန္လာဥျဖဴႀကိတ္ရည္ဟာ ေက်ာက္ကပ္ကို ခ်က္ခ်င္းေဆးေၾကာေပးပါတယ္။ အူက်ေဝဒနာရွင္မ်ားလည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တစ္ပါတ္တစ္ခါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေသာအားျဖင့္ လူတိုင္းမုန္လာဥျဖဴကို ဟင္းလ်ာအျဖစ္ ခ်က္ျပဳတ္စားသုံးျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ကို ေဆးေၾကာထိန္းသိမ္းသင့္ပါတယ္။
မုန္လာဥ အစိမ္းကို သံပုရာသီးႏွင့္ႏွပ္ၿပီး အစိမ္းသုပ္ သုပ္စားပါက ပို၍ေဆးဘက္ဝင္ပါတယ္။မုန္လာဥျဖဴ စားသုံးျခင္းျဖင့္ရရွိႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ကင္ဆာေရာဂါ မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးတယ္။ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ကိုထိန္းညႇိေပးတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ က်န္းမာေစတယ္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို မွန္ေစတယ္။ ဝမ္းမွန္ေစတယ္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ေစတယ္။အသားအရည္ စိုေျပလွပေစတယ္။ အ႐ြယ္တင္ ႏုပ်ိဳေစတယ္။ အသုံးမျပဳမီ ပိုးသတ္ေဆး ကင္းစင္ေအာင္ ေသခ်ာ ေဆးေၾကာသန႔္စင္ေပးရန္ အထူးသတိျပဳပါ။
Posted in က်န္းမာေရးဗဟုသုတ LeaveaComment on ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံး မုန်လာဥဖြူ ဖျော်ရည်လုပ်နည်း။
ဆီးချိုအတွက် အလွန်သင့်တော်ပြီး သွေးတိုး၊ သည်းခြေကျောက်တည်အတွက် သရက်ရွက်။
သရက်ပင်ရဲ့အရွက်က အကျိုးကျေးဇူးတွေ များစွာရှိပါတယ်။ သရက်ရွက်မှာ တန်နင် ခေါ်တဲ့ အန်သိုဆိုင်ရာနင်တွေ ပါဝင်တဲ့အတွက် ဆီးချိုရောဂါနဲ့ ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သွေးကြောရောဂါတွေကို ကုသရာမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။
သရက်ရွက်က ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ကပ်ပါးကောင်တွေကိုလည်း တွန်းလှန်နိုင်တဲ့အပြင် ပိုးသတ်ဆေး၊ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး၊ ချွဲကြေဆေး၊ ရင်ကျပ်ပန်းနာပျောက်ဆေး၊ သွေးတိုးကျဆေး၊ ဝမ်းပျော့ဆေးနဲ့ နှလုံးအားကောင်းတဲ့ဆေး အဖြစ်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ ပိုးမွှားကောင်ကိုက်ရာမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလည်း လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ သရက်ရွက်ကို အောက်ပါရောဂါတွေကုသဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သရက်ရွက်ကို အခြောက်လှန်းပြီး အမှုန့်ပြုလုပ်ထားပါ။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်စာသရက်မှုန့်ကို မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် ပုံမှန် မှီဝဲပေးပါက ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်ခါစအခြေအနေကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သရက်ရွက်မှာပါဝင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေက မုန့်ချိုအိတ်ပတ်ဝန်းကျင်က သွေးကြောတွေကို ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေတာကြောင့်ပါ။ ဒ့ါအပြင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ဂလူးကို့စ်လျော့ကျစေနိုင်တာ၊ သွေးကြောတွေ ကျန်းမာ သန်စွမ်းစေနိုင်တာနဲ့ သွေးဖိအားကျဆင်းစေနိုင်တာကြောင့် ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကျောက်ကပ်ဝေဒနာနဲ့ သွေးတိုးရောဂါကို ကုသရာမှာ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။
သရက်ရွက်မှာ vitamins, enzymes, antioxidants တွေအများအပြားပါဝင်တာကြောင့် သူ့ကိုကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းကတော့ သရက်ရွက်နုနုလေး ၁ဝရွက်ကနေ ၁၅ရွက်အထိခူးပြီး ရေတစ်ဖန်ခွက်စာပမာဏနဲ့ ပြုတ်ပါ။ ပြီးရင် ထိုအတိုင်း တစ်ညတာထားပါ။ နောက်တစ်နေ့ မနက်ရောက်တဲ့အခါ ဘာမှမစားရသေးခင် ပြုတ်ထားတဲ့ အရည်ကို သောက်ပါ။ ဒီအတိုင်း နှစ်လကနေ သုံးလ ဆက်တိုက်သာ လုပ်ပေးမယ်ဆို သင့်ရဲ့ ဆီးချိုရောဂါ ပျောက်ကင်းတဲ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ပြောင်းလဲမှုကို သိသိသာသာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ နေရောင်မကျတဲ့နေရာမှာ သရက်ရွက်တွေကို အခြောက်ခံထားပါ။ပြီးရင် ခြောက်နေတဲ့ အရွက်တွေကို အမှုန့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး တစ်နေ့ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနဲ့နှစ်ဇွန်း သောက်သုံးပေးပါ။ ကျန်းမာရေး သိသိသာသာ ကောင်းမွန်လာတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သရက်ရွက်မှာ Hypotensive သတ္တိတွေပါဝင်တာကြောင့် သွေးတိုးကို ကျစေပါတယ်။
စိတ်တွေရှုပ်ထွေး ဒေါသတွေထွက် စတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်နေသလား… သရက်ရွက် ၃ ရွက်လောက်ကို ရေချိုးတဲ့ ရေနွေးလေးထဲ ထည့်စိမ်ပေးပါ။ ပြီးရင်အဲ့ဒီ့ရေနဲ့ စိမ်ပေးပါ။ ဒါဆိုစိတ်ကို တည်ငြိမ်စေပြီး အပန်းပြေစေပါတယ်။
သရက်ရွက်က အအေးမိ လေပြွန်ရောင်တာနဲ့ ပန်းနာရင်ကြပ်အစရှိတဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သရက်ရွက်ကို ပြုတ်ပြီးပျားရည်အနည်းငယ် ခပ်သောက်ပေးပါ။ အသံဝင်တာတွေအတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။
သည်းခြေ၊ ကျောက်ကပ် ကျောက်တည်တာတွေအတွက်လည်း ကောင်းမွန်-
သရက်ရွက်က ကျောက်ကပ်များ ကျောက်တည်တာအတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။သရက်ရွက်တွေကို အခြောက်လှမ်းပြီး အမှုန့်ထောင်းကာ ရေထဲ တစ်ညစိမ်ပြီး သောက်ရင်လည်း ကျောက်ကပ်ကျောက်တွေ ကျစေနိုင်ပါတယ်။
သရက္ပင္ရဲ႕အ႐ြက္က အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ သရက္႐ြက္မွာ တန္နင္ ေခၚတဲ့ အန္သိုဆိုင္ရာနင္ေတြ ပါဝင္တဲ့အတြက္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါနဲ႔ ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေသြးေၾကာေရာဂါေတြကို ကုသရာမွာ အသုံးဝင္ပါတယ္။
သရက္႐ြက္က ဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔ ကပ္ပါးေကာင္ေတြကိုလည္း တြန္းလွန္ႏိုင္တဲ့အျပင္ ပိုးသတ္ေဆး၊ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး၊ ခြၽဲေၾကေဆး၊ ရင္က်ပ္ပန္းနာေပ်ာက္ေဆး၊ ေသြးတိုးက်ေဆး၊ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးနဲ႔ ႏွလုံးအားေကာင္းတဲ့ေဆး အျဖစ္လည္း အသုံးဝင္ပါတယ္။ ပိုးမႊားေကာင္ကိုက္ရာမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေရာင္ရမ္းမႈေတြကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါတယ္။ သရက္႐ြက္ကို ေအာက္ပါေရာဂါေတြကုသဖို႔အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
သရက္႐ြက္ကို အေျခာက္လွန္းၿပီး အမႈန႔္ျပဳလုပ္ထားပါ။ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဝက္စာသရက္မႈန႔္ကို မနက္တစ္ႀကိမ္ ညတစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ မွီဝဲေပးပါက ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ခါစအေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သရက္႐ြက္မွာပါဝင္တဲ့ ျဒပ္ေပါင္းေတြက မုန႔္ခ်ိဳအိတ္ပတ္ဝန္းက်င္က ေသြးေၾကာေတြကို က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစတာေၾကာင့္ပါ။ ဒ့ါအျပင္ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ ဂလူးကို႔စ္ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္တာ၊ ေသြးေၾကာေတြ က်န္းမာ သန္စြမ္းေစႏိုင္တာနဲ႔ ေသြးဖိအားက်ဆင္းေစႏိုင္တာေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္ကပ္ေဝဒနာနဲ႔ ေသြးတိုးေရာဂါကို ကုသရာမွာ အလြန္အသုံးဝင္ပါတယ္။
သရက္႐ြက္မွာ vitamins, enzymes, antioxidants ေတြအမ်ားအျပားပါဝင္တာေၾကာင့္ သူ႔ကိုက်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းစြာအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ နည္းလမ္းကေတာ့ သရက္႐ြက္ႏုႏုေလး ၁ဝ႐ြက္ကေန ၁၅႐ြက္အထိခူးၿပီး ေရတစ္ဖန္ခြက္စာပမာဏနဲ႔ ျပဳတ္ပါ။ ၿပီးရင္ ထိုအတိုင္း တစ္ညတာထားပါ။ ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ေရာက္တဲ့အခါ ဘာမွမစားရေသးခင္ ျပဳတ္ထားတဲ့ အရည္ကို ေသာက္ပါ။ ဒီအတိုင္း ႏွစ္လကေန သုံးလ ဆက္တိုက္သာ လုပ္ေပးမယ္ဆို သင့္ရဲ႕ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းတဲ့အျပင္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈကို သိသိသာသာခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ေနေရာင္မက်တဲ့ေနရာမွာ သရက္႐ြက္ေတြကို အေျခာက္ခံထားပါ။ၿပီးရင္ ေျခာက္ေနတဲ့ အ႐ြက္ေတြကို အမႈန႔္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး တစ္ေန႔ကို လက္ဖက္ရည္ဇြန္းနဲ႔ႏွစ္ဇြန္း ေသာက္သုံးေပးပါ။ က်န္းမာေရး သိသိသာသာ ေကာင္းမြန္လာတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သရက္႐ြက္မွာ Hypotensive သတၱိေတြပါဝင္တာေၾကာင့္ ေသြးတိုးကို က်ေစပါတယ္။
စိတ္ေတြရႈပ္ေထြး ေဒါသေတြထြက္ စတဲ့စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္ေနသလား… သရက္႐ြက္ ၃ ႐ြက္ေလာက္ကို ေရခ်ိဳးတဲ့ ေရေႏြးေလးထဲ ထည့္စိမ္ေပးပါ။ ၿပီးရင္အဲ့ဒီ့ေရနဲ႔ စိမ္ေပးပါ။ ဒါဆိုစိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေစၿပီး အပန္းေျပေစပါတယ္။
သရက္႐ြက္က အေအးမိ ေလႁပြန္ေရာင္တာနဲ႔ ပန္းနာရင္ၾကပ္အစရွိတဲ့ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြကို သက္သာေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္သရက္႐ြက္ကို ျပဳတ္ၿပီးပ်ားရည္အနည္းငယ္ ခပ္ေသာက္ေပးပါ။ အသံဝင္တာေတြအတြက္လည္း ေကာင္းပါတယ္။
သည္းေျခ၊ ေက်ာက္ကပ္ ေက်ာက္တည္တာေတြအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္-
သရက္႐ြက္က ေက်ာက္ကပ္မ်ား ေက်ာက္တည္တာအတြက္လည္း ေကာင္းပါတယ္။သရက္႐ြက္ေတြကို အေျခာက္လွမ္းၿပီး အမႈန႔္ေထာင္းကာ ေရထဲ တစ္ညစိမ္ၿပီး ေသာက္ရင္လည္း ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္ေတြ က်ေစႏိုင္ပါတယ္။
Posted in က်န္းမာေရးဗဟုသုတ LeaveaComment on ဆီးချိုအတွက် အလွန်သင့်တော်ပြီး သွေးတိုး၊ သည်းခြေကျောက်တည်အတွက် သရက်ရွက်။
ကိုရီးယားအစားအစာ ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ပဲခေါက်ဆွဲပြုလုပ်နည်း။
ကိုရီးယားအစားအစာ ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ပဲခေါက်ဆွဲပြုလုပ်နည်း
ခေါက်ဆွဲချစ်သူတွေရော ကိုရီးယားအစားအစာ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေပါ ခံတွင်းတွေ့စေမယ့် ပဲခေါက်ဆွဲပြုလုပ်နည်း ဝေမျှပေးသွားချင်ပါတယ်။
ခေါက်ဆွဲ ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးစာ၊ ဝက်သား သုံးထပ်သား ဝ.၅ ပေါင်၊ မုန်လာဥဖြူ တစ်ဝက်၊ အာလူး ၃ လုံး (အခွံခွာထားပြီး လက်မဝက်ကုဗတုံး တုံးထားပါ)၊ ကြက်သွန်နီ အကြီး ၁ ဥ၊ ဟင်းရွက်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်း၊ ပဲပိစပ်အနှစ် စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ ဇွန်း၊
အာလူးမှုန့်အရည် (Potato Starch စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်းကို ရေ စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ ဇွန်း၊ သကြားလက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းတို့ဖြင့် သမအောင် ရောနှောထားလိုက်ပါ)၊ နှမ်းဆီလက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ သခွားသီး တစ်ဝက် (အချောင်းလိုက် ပါးပါးလှီးထားပါ)။
ပြုလုပ်နည်း အဆင့်ဆင့် –
၁။ ဝက်သား၊ မုန်လာဥဖြူ၊ အာလူးနှင့် မုန်လာဥနီတို့ကို အရွယ်အစားတူအောင် လက်မဝက်ကုဗတုံးပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် လှီးဖြတ်ထားလိုက်ပါ။
၂။ ဒယ်အိုးကို အပူပေးပြီး ဟင်းရွက်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်းထည့်ပါ။ ထို့နောက် ဝက်သားများထည့်ပြီး ၄ မိနစ်၊ မိနစ်ခန့် မွှေကြော်ပေးလိုက်ပါ။ ဝက်သားများ ရွှေညိုရောင် ပြောင်းသွားပါက ဝက်သားတုံးများကို ဝက်သားအဆီများကို ပန်းကန်ထဲတွင် သပ်သပ်ဖယ်ထည့်ထားလိုက်ပါ။
၃။ မုန်လာဥဖြူထည့်ပြီး ၁ မိနစ်ခန့်ကြော်ပါ။ ထို့နောက် အာလူးနှင့် ကြက်သွန်နီတို့ထည့်ပြီး ၃ မိနစ်ခန့် မွှေကြော်ပေးလိုက်ပါ။
၄။ ထို့နောက် ဒယ်အိုးထဲသို့ ဟင်းရွက်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်းထည့်ပြီးနောက် ပဲပိစပ်အနှစ် စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ ဇွန်းထည့်ကာ တစ်မိနစ်ခန့် သမအောင် မွှေပေးလိုက်ပါ။ ထို့နောက် ရေ ၅၀၀ မီလီလီတာထည့်ကာ အိုးအဖုံးအုပ်ထားပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်ခန့် တည်ထားလိုက်ပါ။
၅။ ဆယ်မိနစ်ပြည့်ပါက အာလူးနှင့် မုန်လာဥတို့ကို အနည်းငယ်ယူပြီး အရသာမြည်းစမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ အာလူးနှင့် မုန်လာဥများ ကျက်သွားပါက အာလူးမှုန့်အရည်များ နည်းနည်းချင်းစီ လောင်းထည့်ပြီး သမအောင် မွှေပေးရပါမယ်။
၆။ အာလူးမှုန့်အရည်များ ပျစ်သွားသည်အထိ မွှေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ နှမ်းဆီ ထည့်ကာ မီးဖိုပေါ်ကချလိုက်လို့ရပါပြီ။ ရရှိလာတဲ့ အာလူး ပဲပိစပ်အနှစ်များကို ခေါက်ဆွဲပေါ် ဆမ်းထည့်လိုက်ပါ။ သခွားသီး အနည်းငယ် ထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သမအောင် မွှေပေးလိုက်ပါ။
ခေါက်ဆွဲနဲ့ တွဲမစားချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ထမင်းနဲ့ ရောနယ်ပြီး ပဲထမင်းအဖြစ် စားသုံးနိုင်ပါသေးတယ်။
Source: maangchi. com
ကိုရီးယားအစားအစာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ ပဲေခါက္ဆြဲျပဳလုပ္နည္း
ေခါက္ဆြဲခ်စ္သူေတြေရာ ကိုရီးယားအစားအစာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူေတြပါ ခံတြင္းေတြ႕ေစမယ့္ ပဲေခါက္ဆြဲျပဳလုပ္နည္း ေဝမွ်ေပးသြားခ်င္ပါတယ္။
ေခါက္ဆြဲ ပန္းကန္လုံးတစ္လုံးစာ၊ ဝက္သား သုံးထပ္သား ဝ.၅ ေပါင္၊ မုန္လာဥျဖဴ တစ္ဝက္၊ အာလူး ၃ လုံး (အခြံခြာထားၿပီး လက္မဝက္ကုဗတုံး တုံးထားပါ)၊ ၾကက္သြန္နီ အႀကီး ၁ ဥ၊ ဟင္း႐ြက္ဆီ စားပြဲတင္ဇြန္း ၃ ဇြန္း၊ ပဲပိစပ္အႏွစ္ စားပြဲတင္ဇြန္း ၅ ဇြန္း၊
အာလူးမႈန႔္အရည္ (Potato Starch စားပြဲတင္ဇြန္း ၂ ဇြန္းကို ေရ စားပြဲတင္ဇြန္း ၄ ဇြန္း၊ သၾကားလက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္းတို႔ျဖင့္ သမေအာင္ ေရာေႏွာထားလိုက္ပါ)၊ ႏွမ္းဆီလက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း၊ သခြားသီး တစ္ဝက္ (အေခ်ာင္းလိုက္ ပါးပါးလွီးထားပါ)။
ျပဳလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ –
၁။ ဝက္သား၊ မုန္လာဥျဖဴ၊ အာလူးႏွင့္ မုန္လာဥနီတို႔ကို အ႐ြယ္အစားတူေအာင္ လက္မဝက္ကုဗတုံးပုံသ႑ာန္ျဖင့္ လွီးျဖတ္ထားလိုက္ပါ။
၂။ ဒယ္အိုးကို အပူေပးၿပီး ဟင္း႐ြက္ဆီ စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ ဇြန္းထည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ဝက္သားမ်ားထည့္ၿပီး ၄ မိနစ္၊ မိနစ္ခန႔္ ေမႊေၾကာ္ေပးလိုက္ပါ။ ဝက္သားမ်ား ေ႐ႊညိဳေရာင္ ေျပာင္းသြားပါက ဝက္သားတုံးမ်ားကို ဝက္သားအဆီမ်ားကို ပန္းကန္ထဲတြင္ သပ္သပ္ဖယ္ထည့္ထားလိုက္ပါ။
၃။ မုန္လာဥျဖဴထည့္ၿပီး ၁ မိနစ္ခန႔္ေၾကာ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အာလူးႏွင့္ ၾကက္သြန္နီတို႔ထည့္ၿပီး ၃ မိနစ္ခန႔္ ေမႊေၾကာ္ေပးလိုက္ပါ။
၄။ ထို႔ေနာက္ ဒယ္အိုးထဲသို႔ ဟင္း႐ြက္ဆီ စားပြဲတင္ဇြန္း ၂ ဇြန္းထည့္ၿပီးေနာက္ ပဲပိစပ္အႏွစ္ စားပြဲတင္ဇြန္း ၅ ဇြန္းထည့္ကာ တစ္မိနစ္ခန႔္ သမေအာင္ ေမႊေပးလိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေရ ၅၀၀ မီလီလီတာထည့္ကာ အိုးအဖုံးအုပ္ထားၿပီးေနာက္ ၁၀ မိနစ္ခန႔္ တည္ထားလိုက္ပါ။
၅။ ဆယ္မိနစ္ျပည့္ပါက အာလူးႏွင့္ မုန္လာဥတို႔ကို အနည္းငယ္ယူၿပီး အရသာျမည္းစမ္းၾကည့္လိုက္ပါ။ အာလူးႏွင့္ မုန္လာဥမ်ား က်က္သြားပါက အာလူးမႈန႔္အရည္မ်ား နည္းနည္းခ်င္းစီ ေလာင္းထည့္ၿပီး သမေအာင္ ေမႊေပးရပါမယ္။
၆။ အာလူးမႈန႔္အရည္မ်ား ပ်စ္သြားသည္အထိ ေမႊၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ႏွမ္းဆီ ထည့္ကာ မီးဖိုေပၚကခ်လိုက္လို႔ရပါၿပီ။ ရရွိလာတဲ့ အာလူး ပဲပိစပ္အႏွစ္မ်ားကို ေခါက္ဆြဲေပၚ ဆမ္းထည့္လိုက္ပါ။ သခြားသီး အနည္းငယ္ ထည့္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ သမေအာင္ ေမႊေပးလိုက္ပါ။
ေခါက္ဆြဲနဲ႔ တြဲမစားခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ထမင္းနဲ႔ ေရာနယ္ၿပီး ပဲထမင္းအျဖစ္ စားသုံးႏိုင္ပါေသးတယ္။
Posted in ဗဟုတုသ LeaveaComment on ကိုရီးယားအစားအစာ ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ပဲခေါက်ဆွဲပြုလုပ်နည်း။
မျက်စိရောဂါအမျိုးမျိုးနှင့် အပူအားကြီးသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်သော ဗမာဆေးနည်း။
မျက်စိိရောဂါ အားလုံးနှင့် အပူရောဂါအတွက််
ဒီနှစ် အပူချိန်အလွန်များတယ်။ ဆီးရောဂါအဖြစ်များတယ် ။ မိုးဦးကာလ. မျက်စိိရောဂါ မျက်စိခိိုက်ရောဂါတွေ ကျိန်းသေဖြစ်လာကြလိိမ့်မယ်။
မျက်စိမှုန် ၊မျက်စိသီ၊ မျက်ဝတ်များ၊ မျက်ရိုးကိိုက်ရောဂါများ မဖြစ်ဖို့ ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ကြိုတင်ကာကွယ်ဖိို့ ဒီဆေးလေးသောက်ထားကြပါ။ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ ထိရောက်မှုရှိသော ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ထန်းလျက်် ၃၀ သား
၂။ ရှားစောင်းလက်ပတ်် အနှစ် ၃၀ သား
၃။ မကျည်းမှည့် အနှစ်် ၂၀သါး
အားလုံးတေ၍ နေပူမှာ ၃ရက်လှန််း။ ညစဉ်် ကွမ်းသီးတစ်ခြမ်းခန့်စား။ မျက်စိရောဂါအမျိုးမျိုး နှင့်် အပူအားကြီးသူများအတွက် အထူးသင့်လျော််ပါသည်။
မ်က္စိိေရာဂါ အားလုံးႏွင့္ အပူေရာဂါအတြက္္
ဒီႏွစ္ အပူခ်ိန္အလြန္မ်ားတယ္။ ဆီးေရာဂါအျဖစ္မ်ားတယ္ ။ မိုးဦးကာလ. မ်က္စိိေရာဂါ မ်က္စိခိိုက္ေရာဂါေတြ က်ိန္းေသျဖစ္လာၾကလိိမ့္မယ္။
မ်က္စိမႈန္ ၊မ်က္စိသီ၊ မ်က္ဝတ္မ်ား၊ မ်က္႐ိုးကိိုက္ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ဖို႔ ဂ႐ုစိုက္ရပါမယ္။ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖိို႔ ဒီေဆးေလးေသာက္ထားၾကပါ။ အလြယ္ကူဆုံးနဲ႔ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေဆးျဖစ္ပါတယ္။
၁။ ထန္းလ်က္္ ၃၀ သား
၂။ ရွားေစာင္းလက္ပတ္္ အႏွစ္ ၃၀ သား
၃။ မက်ည္းမွည့္ အႏွစ္္ ၂၀သါး
အားလုံးေတ၍ ေနပူမွာ ၃ရက္လွန္္း။ ညစဥ္္ ကြမ္းသီးတစ္ျခမ္းခန႔္စား။ မ်က္စိေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္္ အပူအားႀကီးသူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္္ပါသည္။
Posted in က်န္းမာေရးဗဟုသုတ LeaveaComment on မျက်စိရောဂါအမျိုးမျိုးနှင့် အပူအားကြီးသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်သော ဗမာဆေးနည်း။